wireless AHD backup kamera yekutarisa
Shenzhen Sunveytech Co.,LTD [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Markets: Americas , Europe , Worldwide Exporter:71% - 80% Certs:CE, FCC, RoHS Tsanangudzo:yeBhazi Rori VR Van Carava,kudzosera rubatsiro ,Husiku Vision Rear View
Home > Products > Wireless Backup Kamera Systems > Digital Wireless Backup Kamera Kit > wireless AHD backup kamera yekutarisa
Muenzaniso Nha.: cx77+612T
Packaging: Neutral Bhokisi kana Rakagadziriswa Rakajeka Bhokisi
Mhando dzeRV Backup Makamera
Kune mhando mbiri dzeRV backup kamera yekutarisa kune:
Wiring uye Wireless.
Ngatidzikei zvakadzama zvishoma mune imwe neimwe mhando.
Wired RV Backup Makamera
Iyo kamera yeRV backup kamera inokwanisa kushandiswa pane chero RV - mota dzimba, yechishanu mavhiri, zvishandiso trailer, zvekufambisa trailer, nezvimwe.
Nekuti iyi backup kamera yakabatirwa muRV yako, haufanire kuzvinetsa nekurasikirwa nemasaini zvakanyanya sezvaungaita neasina wireless RV backup macamera (izvi zvakanyanya zvakanaka kana uine RV refu, kuchengetedza chiratidzo kunowedzera kuenderera mberi away it is).
Wired RV backup macamera inowanzoita mutengo wakadarika kupfuura isina waya RV kamera, zvisinei. Kunyanya kana iwe uchida kuve nayo inonyanzvi yakaiswa.
Wireless RV Backup Makamera
Wireless RV backup makamera zviri nyore kuisa.
Vanoda kubatidzwa muDC (12 volt) mukati meRV yako uye boom - wakanaka!
Iyo yekutarisira yakadzurwa muutsi hwefodya mune kontrakiti yeRV yako uye unouya neyakagadzika bracket kana mukombe wekukweta kuti ugare pamusoro peRV dash.
Dambudziko hombe neasina waya RV backup macamera ndeyekusatendeseka kwavanogona kuita (zvichienderana nehukuru hweRV yako). Vazhinji vanonyunyuta nezvechiratidzo chisina kusimba zvakakwana.
Chii Chiri Nyowani? Zviri kwauri chaizvo!
Product Categories : Wireless Backup Kamera Systems > Digital Wireless Backup Kamera Kit
Dhijitari Wireless Rear View Monitor Reverse Kamera System
Wireless Dhijitari Monitor 7inch Wireless Yakagadziriswa Kamera yeKit
Wireless Dhijitari Reverse Kamera Monitor 7inch
Mberi Side Kumashure Kuona Kamera System Dhijitari Wireless
Mberi Side Rear View Reversing Kamera Kits
yeBhazi Rori VR Van Carava
Husiku Vision Rear View
Makamera eBhazi Rori VR Van Carava
Reverse Makamera eBhazi Rori VR Van Carava
Rori AHD Backup Kamera